श्रीमती रेक्टर, श्रीमान विज्ञः विदेशी परियोजनाको रकममा ब्रम्हलुट « Naya Page
श्रीमती रेक्टर, श्रीमान विज्ञः विदेशी परियोजनाको रकममा ब्रम्हलुट
प्रकाशित मिति : April 7, 2019
काठमाडौं, २४ चैत । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि युरोपियन युनियनको इरास्मस परियोजना (इक्यूएसए) बाट प्राप्त हुने रकममा ब्रम्हलुट हुने गरेको पाइएको छ । उक्त रकम शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठीले पदको दुरुपयोग गर्दै विदेश भ्रमणमा खर्चेको तथ्य भेटिएपछि यो रहस्य खुलेको हो ।
रेक्टर सुधा त्रिपाठी र उनका श्रीमान रमेशप्रसाद भट्टराई
उक्त स्रोतका अनुसार रेक्टर त्रिपाठीले पति भट्टराईलाई ग्रिस, चेन्नाई, इटाली, स्पेन, चीन, अमेरिकालगायतका प्रायः देशको भ्रमणमा लैजाँदा परियोजनाको रकम खर्च गर्नुभएको छ ।
चेन्नाई, इटालीलगायत मुलुक भ्रमणमा रेक्टर त्रिपाठी पतिसँगै पुग्नुभएको छ । भट्टराईले विभिन्न मुलुक भ्रमण गर्दा १० लाख रुपियाँभन्दा बढी एड्भान्स रकम लिनुभएको छ । अधिकांशले थोरैमा १ लाखदेखि २ लाख रुपियाँसमेत एडभान्स लिएका छन् । परियोजनामा करिब ३२ हजार युरो अर्थात् करिब ३५ लाख रुपियाँ रकम आएको थियो । तीमध्ये करिब २९ लाख रुपियाँ भ्रमणमै सकिएको छ । विदेश गएपछि बिल पेस गरी रकम लिनुपर्ने प्रावधानलाई लत्याउँदै एड्भान्सको रुपमा रकम लिने गर्नुभएको हो ।
त्रिविका अधिकारीले भ्रमणको खर्च विवरण माग गर्दा परियोजनाका अधिकारीले दिन इन्कार गरेको थियो । स्रोतका अनुसार रेक्टर त्रिपाठीले पति भट्टराईलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा समेत स्वदेश तथा विदेशका लागि पटकपटक तलबी काज स्वीकृत गर्ने तर अरुको काज समेत स्वीकृत नगर्ने गर्नुहुन्छ । यसबारे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
सोही उजुरीको आधारमा रेक्टर कार्यालयले कुन व्यक्ति के प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमणमा गएको भन्ने विषयमा सूचना उपलब्ध गराएको थियो । स्मरणीय छ, पति प्राडा भट्टराई राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको सहसंयोजक हुनुहन्छ ।
रेक्टर त्रिपाठीका पति भट्टराईको भ्रमणबारे कार्यकारी निर्देशक पोखरेलको प्रतिक्रिया छ– खै यसबारे मैलाई थाहा छैन, त्यो संयोग होला । कुनै कुनै भ्रमणमा भने त्रिविका योजना महाशाखा प्रमुख प्राडा ऋदिष पोखरेल, विष्णुप्रसाद खरेल, वियजयलाल प्रधानलगायत सहभागी हुने गर्नुभएको छ ।
परियोजनाकै विषयमा विवाद आएपछि आफू भ्रमण जानै छाडेको दाबी गर्दै त्रिवि योजना महाशाखा प्रमुख डा. ऋषि पोखरेल भन्नुहुन्छ– ‘दुई पटक मात्रै गएको हो ।’
भ्रमण र एडभान्स रकमको सम्पूर्ण विवरण समेटिएको कागजात नेपाल सुरक्षित छ, आजको समाचारपत्र दैनिकमा इश्वरराज ढकाल लेख्छन्– ईयूको सो परियोजनाका लागि आएको रकम विवरण विश्वविद्यालयको केन्द्रीय खातामा दाखिला हुनुपर्छ । तर कुन आधारमा कसरी रकम लगियो भन्ने विषयमा त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा. दिल्ली उप्रेतीलाई नै जानकारी नै छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘के भएको हो बुझनुपर्छ, चेकमा मेरो हस्ताक्षर छ कि छैन हेर्नुपर्छ ।’
परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म आएको करिब २२ लाख रुपियाँ सबै त्रिविको गुणस्तर सुधारमा खर्च भएको छ । भ्रमणका उपलब्धिबारे भन्नुहुन्छ– ‘विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छौ, त्रिविको सुधारमा ठूलो उपलब्धि भएको छ ।’ यद्यपि त्रिविको उच्च स्रोत दाबी गर्दछ– ‘यसैको नाममा विदेश शयर गर्नेबाहेक परियोजनाले हालसम्म कुनै उपलब्धि हासिल गरेको छैन ।’
अमेरिका भ्रमणमा निस्कन लागेका पराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, ‘एमसीसी प्राथमिकताको सूचीमा छैन’